« ‘Ndao handihy »: hovelarina kokoa ny vakodrazana | NewsMada
« ‘Ndao handihy »: hovelarina kokoa ny vakodrazana
Tafatsangana ara-panjakana ny Vovonan’ny mpanao vakodrazana malagasy . Nomarihina tamin’ny alalan’ny hetsika nampitondraina ny lohateny « ‘Ndao handihy » notanterahina tao amin’ny Ivokolo Cemdlac Analakely io fahazoana ny taratasy maha ara-dalana ny vovonana io, omaly. Nambaran-dRakotoarison Joseph, filohan’ny Vovonan’ny mpanao vakodrazana malagasy tamin’izany fa : « tsy hijanona amin’izao hetsika izao ihany ny vovonana fa hiezaka ny hanapariaka ny vakodrazana any amin’ny toerana sy faritra maro ». Raha ny fanazavany hatrany, hatomboka eto an-dRenivohitra izany ka kendrena hisy fampisehoana iray isam-bolana amin’izao fanombohana izao.
… Aoriana kely, hivoaka ny Renivohitra ny mpanao vakodrazana. « Atao tsikelikely ny fanatanterahana io satria tsy mora ny hoenti-manana », hoy hatrany Rakotoarison Joseph. « Mety ho tratra, ohatra, iny faritra andrefan’Antananarivo iny : Imerintsiatosika, Arivonimamo, Miarinarivo, Soavinandriana… Tahaka izany koa ny mianatsimo : Ambatolampy, Antsirabe… », hoy izy.
Nanao antso ity filohan’ny Vovonan’ny mpanao vakodrazana ity ny tokony mba hijeren’ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany ny vakodrazana. « Aza hadinoina fa harena goavana be ho an’ny Malagasy ny vakodrazana satria ahitana izany avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Izany hoe, marobe ny vakodrazana ananantsika », hoy izy.
Mitohy androany ny fampirantiana sy ny fanehoana ireo fomba fitafy sy taovolo isaky ny faritany, etsy amin’ny Ivokolo Cemdlac.